XAFIISKA QARAMADA MIDOWAY U QAABILSAN ARRIMAHA SIYAASADA SOOMAALIYA.
Nairobi, 27 March 2009:
Ergayga Gaarka ee Qaramadda Midooway u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya, AXMEDOU OULD-ABDALLA ayaa si xoog leh u cambaareeyey kuwii mas’uulka ka ahaa qaraxii wadada hareeraheeda ka dhacay, qaraxaasoo lagu dhaawacay Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya Sheekh Cabduqaadir Cali Cumar isla markaasna lagu dilay mid ka mid ah kaaliyeyaashiisa.
“Waxaan ka naxay weerarkan lagu qaaday Wasiirka Arrimaha gudaha iyo kaaliyeyaashiisa ” ayuu yiri Axmed Ould-Cabdalla. “ Wasiirka wuxuu socday meel dadku ku badan yihiin oo suuqa bakaaraha ka mid ah. Falkani waa fal fulaynimo lagana cambaareeyey dhamaan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba.
Wixii war dheeraad ah fadlan la xiriir: Susanah Price or Donna Cusumano,
Public Information Officers, UN Political for Somalia (Nairobi, Kenya) Tel: +254 20 762 1192/1625 or +254 733902020/737400133 Please visit: www.UN-Somalia.org